Nnwom 36 NA-TWI - Psalmii 36 NTLR | Biblica América Latina
Nnwom 36 NA-TWI - Psalmii 36 NTLR
Onipa bɔne su
1Bɔne kasa kyerɛ ɔdebɔneyɛfo ma edu ne koma mu pɛɛ; ɔpa Onyankopɔn na onni no ni. 2 Esiane sɛ odwen n’ankasa ho nti, osusuw sɛ Onyankopɔn renhu ne bɔne mmu no fɔ. 3 Ne kasa yɛ bɔne na atoro ahyɛ no ma; afei ɛnyɛ ade a nyansa wɔ mu na ɔyɛ. 4 Ɔda mpa so no, na ɔredwen bɔne ho. Biribiara nni hɔ a ɔyɛ a, eye. Na ɔmpɛ sɛ ogyaa bɔneyɛ.
5 Awurade, wo dɔ a ɛnsa da no du sorosoro. Wo nokware du sorosoro. 6 Wo trenee hɔre te sɛ mmepɔw. W’atɛntrenee mu dɔ sɛ ɛpo mu. Nnipa ne mmoa nyinaa hyɛ wo nsa. 7 O Onyankopɔn, wo dɔ a ɛnsa da no som bo! Yenya guankɔbea wɔ wo ntaban nwini no ase. 8 Yedi nnuan bebree a wode ma yɛn no. Woma yɛnom w’adom asuten no mu.
9 Wone nkwa nyinaa ti, esiane wo hann nti, yehu hann no. 10 Kɔ so dɔ wɔn a wonim wo no, na yɛ atreneefo papa. 11 Mma ahantanfo mma me so; anaa mma nnebɔneyɛfo mma me nnguan. 12 Hwɛ baabi a nnebɔneyɛfo atetew ahwe. Wɔn na wɔdeda hɔ a wontumi nsɔre no.
NA-TWI : Nnwom 36